Kpokọta Egwuregwu bụ ihe egwuregwu iji chọta taịlị arụkọ | Gam akporosis
Chọọ maka mgbakwunye na-agbakwunye iji jikọta ọtụtụ narị na egwuregwu Gather Match
Kpọkọtanụ Egwuregwu bụ ihe mgbagwoju anya ọhụrụ na na ọ bụ otu n'ime ndị na-atụrụ ndụ a otutu ka anyị na ikpokọta efu iberibe otu nke iberibe. Egwuregwu dị ka Tetris ma ọ dịkarịa ala na echiche ọhụụ na nke ahụ na 3D nwere ike ịmepụta ahụmịhe egwuregwu na-atọ ụtọ.
Un aha ọhụrụ maka gam akporo nke ka nwere nyocha ole na ole, ma o doro anya na obere obere egwuregwu ga-agbakwunye na ụzọ ya dị mma nke ịghọta mgbaghoju anya. Ọ bụghị na ọ mepụtara wiil ahụ, mana ọ na-enye echiche dị mma maka ijikọta taịl ma ọ bụ blọk n'ụzọ dị iche iche. Gaa maka ya.
1 Gwakọta ngọngọ nke nkeji dị iche iche na Gather Match
2 Mgbe ihe dị nfe dị ike
3 Oge efu na mgbasa ozi nke 30
Gwakọta ngọngọ nke nkeji dị iche iche na Gather Match
Kpọkọtanụ egwuregwu bụ ihe mgbagwoju anya ọhụụ maka gam akporo nke anyị ga-pịa otu taịl nile n'aka ekpe ịchọta nke mejupụtara ya. Anyị nwere mgbalị abụọ iji nwee ike idozi nke ọ bụla n’ime kaadị anyị nwere iji zuo ezu na ndị niile ha tinyere anyị.
Na eziokwu, ihe nwere ike bụrụ nnọọ ihe dị mfe, na-aghọ ihe omume ntụrụndụ iji jikọta taịl ma chọta nkwado ha. A Egwuregwu 3D nke anyị hụrụ ụfọdụ lag, ma nke ahụ adịghị ekpuchido ahụmịhe ọhụụ nke egwuregwu ọhụrụ gam akporo a.
Ka anyị n'aga n'ihu anyị ga-enwekwu taabụ na ihuenyo na ọbụlagodi eserese nke ụdị akara dị iche iche nke anyị ga-etolite na mpempe ndị na-adịghị n'usoro. Ọ bụ ihe ntụrụndụ nke ndị na-amasị ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu ma mechaa ọkwa niile.
Mgbe ihe dị nfe dị ike
Na ahịa siri ike nke egwuregwu nkịtị ma ọ bụ egwuregwu mgbagwoju anya, ọ dịghị mfe ịpụ na ndị ọzọ ka ha wee malite igwu egwuregwu gị bidoro na Storelọ Ahịa Play; karịsịa n'ihi na a okwu nke a ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu clones ga-egosi n'ebe nile i imitateomi gị arụzi ụgbọala na ya mere gbalịa ịkpụkọrịta ahịa ahụ ị nwere (Ka ha gwa Eze na onye ọ heomiri).
Ọ bụ ya mere Kpọkọtanụ Egwuregwu bụ egwuregwu dị mfe ma dị ike na site na ahụmịhe dị mfe nke itinye n'akụkụ otu iberibe na-enweghị nkwado ha n'akụkụ nke ọzọ, ọ na-aghọ ahụmịhe egwuregwu niile.
Ma ọ bụ ya nke kacha mma ka ga-abịa na ọkwa ndị ahụ Kedu ụdị mpempe ụdị nke ụdị ọ bụla na-amalite ịmalite ihuenyo ma nwee ike ịbịaru obi ma ọ bụ ụdị akara ndị ọzọ.
Oge efu na mgbasa ozi nke 30
Oh, a dụrụ gị ọdụ na mgbe ole na ole etoju ị ga-eloda "n'ụzọ nkịtị" a 30 abụọ ad. Ọbụghị na-enweghị ọbụna ise n’ime ndị nke ị nwere ike imechi, mana ha zuru ezu. Ma ọ dịkarịa ala, maka ugbu a, na obere ụlọ ọrụ, anyị anaghị ahụ ọkwa ọzọ gara aga ole na ole, wee dị mma maka ugbu a.
Anya na agba ya niile na mpempe ndị ahụ na 3D Ọ bụ ebe egwuregwu a na-akpọ Gather Match na-enweta mmeri yana nke anyị nwere n'efu. O nweghi ọdịnaya ma ọ bụ ihu ma ọ bụ ụdị ihe ọ bụla, naanị ọkwa ka anyị nwee ike ịga nke na-esote ma ọ bụ bidogharịa ma ọ bụrụ na anyị agafewo mgbalị abụọ ahụ dara.
Kpọkọtanụ egwuregwu dị maka n'efu na mgbasa ozi sitere na Storelọ Ahịa Play dị ka ihe efu otu n'ime ndị ahụ ị malitere ma kwụsị ịkwụsị igwu egwu ruo mgbe ị mechara ya. Mgbe ị rụchara ya laghachi tetris.
Ihe omuma ohuru nke ndi di otua na eme ka anyi nwee obi uto banyere ihe mmasi ha.
Usoro edemede: 6,5
Mgbe enwere otutu iberibe na ihuenyo
Ọ nwere ike ịdị laggy n'oge ụfọdụ
Developer: Egwuregwu Tatem Inc.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Chọọ maka mgbakwunye na-agbakwunye iji jikọta ọtụtụ narị na egwuregwu Gather Match
Samsung ịmalite ụdị Lite nke Galaxy Tab S7